Mpanoratra Breziliana manasongadina ireo tantaran’ny mainty ao amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Breziliana manasongadina ireo tantaran'ny mainty ao amin'ny Twitter
Misahotaka ny aterineto amoahan'i Ale Santos tantara tahaka ny fandripahana tao Congo
Voadika ny 15 Desambra 2019 13:14 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, عربي, Español, Français, русский, 繁體中文, नेपाली, Português, English
Ale Santos, mpikaroka sady mpanoratra. Sary avy amin'i Paulinho, nahazoana alalana.
Misy hazo antsoina hoe baobab (adansonia) mitombo eto Afrika, Afovoany-atsinanana ary Aostralia. Nihevitra ny Afrikanina sasany fa rehefa mandeha manodidina izany hazo ianao, dia hanadino zavatra momba ny fiainanao. Talohan'ny nanerena ny olona babo hiditra an-tsambo, teren'ireo mpanandevo hanao faribolana manodidina ny hazon'ny fanadinoana izy ireo mba hanadinoin'izy ireo ny kolontsainy sy ny fiainany.
Milaza izany tantara fohy izany tao amin'ny savaranonandon'ny bokiny Rastros da Resistência (“sakeliky ny fifaharana,” amin'ny teny Paortiogey), angona tantara 20 momba ny tena fiainan'ireo mahery fo mainty hoditra ilay Breziliana mpanoratra Ale Santos, boky izay navoaka tamin'ny volana oktobra tao Brezila.
Na dia teo aza ny ezaka nataon'ny Eoropana mba hanafoana ny famantarana sy ny fiavian'ny olona nandevozina, dia nilaza tao amin'ny bokiny i Santos fa nihazona ny tantaran'i Afrika sy ny ampielezany mba ho velona ny fomban-drazana am-bava, tahaka ilay tantara momba ny baobab izay tena zava-dehibe ankehitriny mba hisaintsainana indray harena ara-kolontsaina noheverina fa very. Manoratra izy hoe:
Ao Afrika Andrefana, nisy ny griots (na djéli, amin'ny teny Frantsay), mpiambina ny fomban-drazana am-bava. Nanana toerana malaza izy ireo ary indraindray nanao asa hafa, toy ny iraka, mpitondra hafatra, mpampihavana amin'ny ady ary mpanao asa tanana. Saingy ny tena zava-dehibe indrindra, dia izy ireo no rakitra velona tamin'ireo zava-nitranga lehibe teo amin'ny vahoakan'izy ireo.
Vokatry ny fikarohana naharitra herintaona sy tapany sy ny kaonty Twitter maodelin'i Santos @savagefiction, izay fanta-daza ao Brezila amin'ny firesahana momba ny tantaran'i Afrika sy ny ampielezany ilay boky.
Nanomboka nitantara ireo hetsika manan-tantara tao amin'ny WhatsApp, tamin'ny vondrona madinika niaraka tamin'ny namany i Santos tamin'ny voalohany. Nanapa-kevitra hanao fitantarana tamin'ny Twitter izy ny volana Jiona 2018. Ny andian-dresaka momba ny fandripahana olona 8-10 tapitrisa nataon'i Leopolod II avy ao Belzika tao amin'ny Repoblika Demaokratikan'i Kongo ankehitriny teo anelanelan'ny taonjato faha-19 sy ny fanombohan'ny taonjato faha-20 no andian-dresaka Twitter voalohany nalaza be nataon'i Santos ,
Marobe ireo tsy rariny ara-tantara nihatra tamin'ny vahoaka Afrikanina, fahadisoana ny mihevitra ny Fandripahana Jiosy ho toy ny heloka bevava goavana indrindra nihatra tamin'ny olombelona. Leopold II no olon-doza be mpangetaheta rà indrindra. Tantara mampalahelo izany,saingy tsara fantarin'ireo izay mbola tsy mahalala ny fandripahana nitranga tany Kongo.
Nahatsapa i Santos avy eo fa fitaovam-piadiana mahery vaika ho an'ny fahalalana ny tantara. Taorian'ny tantara momba ny Mpanjaka Leopold, nanoratra momba ny zoo olombelona izy, naseho tahaka ny biby ny olombelona avy amin'ny faritra sasany nozanahan'i Eoropa.
Tokony hientam-po ny Eoropeana noho ny tsy fisian'ny fahatsiarovana ara-tantara tany amin'ireo firenena nozanahana. Mora ny manadino ny habibiana sy ny fandravaravana taloha rehefa tsy misy olona mitantara momba izany. Ity tantara ity dia ho an'ireo tsy mahalala momba ny zoo mpanavakavaka tsy manaja ny maha-olona izay nisy teto amin'izao tontolo izao.
Mifantoka indrindra amin'ny olo-malaza ara-tantara tsy dia be mpahalala i Santos, tahaka an'i Dragão do Mar (“dragon'ny ranomasina”), mpitarika ireo mpiasa mpanao asa tanana izay nanakana ny fivarotana andevo tao amin'ny fanjakana avaratra-atsinanana ao Ceará, sy i Tereza de Benguela, mpanjakavavin'i quilombo (toeram-ponenana tamin'ny fotoanan'ny fanjanahan-tany, izay olona nandositra ny fanandevozana no ankamaroan'ny mponina tao); indray mandeha izy nanoratra momba ny politikan'ny fanafotsiana vahoaka tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-20 tany Brezila, na ireo zava-nitranga tahaka ny famonoana faobe ireo gadra 111 tao amin'ny fonjan'i São Paulo tamin'ny taona 1992.
Maro ireo olona tsy mahafantatra, fa manana tantaran'olona mpanafoana fanandevozana izay mety hahatonga ny mainty hoditra rehetra hangovitra sy handrehatra ny afon'ny fireharehan'ny razambe ho an'ny tolontsika. Holazaiko ao amin'ity randrambaovao ity ny iray amin'izy ireo, ilay mpiady iray tsy natahotra fantatra amin'ny anaram-biby goavambe amin'ny angano hoe: Dragão do Mar (dragon'ny ranomasina).
Tamin'ny taona 2003, nahatonga ny Tantara sy Kolontsaina Afrikanina-Breziliana ho taranja tsy maintsy ampidirina amin'ny fandaharam-pianaran'ny firenena ny lalàna iray. Enina ambin'ny folo taona izay, tsy mbola nampiharina tany amin'ny sekoly rehetra izany, fa miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny tsirairay mitokana.
Brezila no firenena farany tao amin'ny tontolo tandrefana nanafoana ny fanandevozana, tamin'ny taona 1888, ary anisan'ny mpandray betsaka indrindra an'ireo vahoaka Afrikanina nandevozina: milaza ny tahiry Slave Voyages fa olona 5.099.816 no nalefa an-tsambo ho andevo tao amin'ny firenena nanomboka tamin'ny taona 1500 ka hatramin'ny taona 1875.
Araka ny filazan'i Santos tamin'ny Global Voices tamin'ny alàlan'ny WhatsApp, misy ny fomba amam-panao ratsy amin'ny fitantarana tantara avy amin'ny fomba fijerin'ny mpanjanaka. Namela holatra lalina tao amin'ny firenena rehetra izay nandia fanjanahan-tany, izay nangalatra ny fahasamihafan'izy ireo sy ny kolontsain'izy ireo ny fametrahana an'i Eoropa ho foitran'izao tontolo izao, hoy izy.
Ny filazana ireo tantara izay zara raha hita any amin'ny tantara-jeografia dia ny hanomezana fahamendrehana vaovao ho an'ireo olona manorina indray ny maha-zava-dehibe azy ireo, amin'ny hetsika demaokratika, tontolo iray izay hahatsapan'ny rehetra fa ankasitrahana izy
Tena misy fiantraikany amin'ny tsirairay izany. Misy fiantraikany amin'ny fomba fahitan'ny fiarahamonina izany olona izany, tsy misy hevi-draikitra, mankatoa ny razambeny sy lanjany ara-kolontsaina ao anatin'ny fiarahamonina, ao amin'izay rehetra misy demaokrasia.
Nahazo dera avy amin'ilay mpiangaly rap Breziliana Emicida ihany koa i Santos. Manoratra amin'ny vovoky ny fonomboky, mampitaha ny famafana ny famantarana sy ny fomban-drazan'ny mainty hoditra tamin'ny alalan'ny rafitra fanandevozana amin'ny fandehanana manodidina sy mijery ny alokao ihany, tsy ahitana dindo amin'ny fitaratra ilay mpiangaly rap.
Ny fanavakavahana ara-drafitra dia mikendry ny vatana tsy fotsy, mikendry ny fakantsika sary an-tsaina ny kolontsaina. Eo izy no miezaka mandondona ao aminao alohan'ny ahafahanao miditra anaty sehatra. Amin'ny ezaka iraisan'izy ireo, dia samy miezaka manome antoka izy ireo fa tsy misy dikany aminao ny tenin'i René Descartes hoe – “Penso, logo existo” – na “Izaho mieritreritra, mampisy ahy”. Noforonin'ny olombelona ny mahaizy azy noho ny fahaiza-mamolavola ny fakana sary antsaina amin'izay mitovy amintsika amin'ny alàlan'ny tantara maro.